Udo dị n’etiti Israel na Palestine? Na-atụle nzọụkwụ ọzọ ...
Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Akụkọ njem Israel » Udo dị n’etiti Israel na Palestine? Na-atụle nzọụkwụ ọzọ…
Udo dị n’etiti Israel na Palestine? Na-atụle nzọụkwụ ọzọ…
Ndị Palestine na-egbu kwa ụbọchị site n'aka ndị na-ahụ maka ichebe Israel. Ọtụtụ ụmụaka so na ndị nwụrụ anwụ. Ikpe ikpe site na foto na vidiyo kesara na ịntanetị, na ilele anya na mgbasa ozi ọha na eze, ọ dị ka ndị Palestaịn bi na ghetto ruo ebere nke onye na-achị, bụ steeti Israel. Mgbe ndị mmadụ na-enweghị ihe funahụrụ ohere maka mgbawa dị oke elu.
Njem nleta emeela akụkụ dị nta n'ime ka akụkụ abụọ ahụ kwenye na okwu, mana ụlọ ọrụ a enweghị ike idozi esemokwu dị na aka.
Nkwupụta a na-adịbeghị anya site na Jerusalem na Washington dabeere Ahụike gosipụtara ụfọdụ echiche mgbe ndị na-eche echiche na-atụle ọnọdụ dị ugbu a nke esemokwu Israel na Palestine na ihe nwere ike ịbụ na-esote maka usoro udo. Isiokwu ahụ na-egosi ihe osise nke Onye isi ala nke Palestine na Palestine National Authority Mahmoud Abbas, na Benjamin “Bibi” Netanyahu, onye isi ala nke Israel ugbu a kemgbe 2009, na-ejide ọnọdụ mbụ site na 1996 ruo 1999
Mgbe ọ bụla a na-agwa ndị ọkachamara ka ha depụta usoro esemokwu dị ka nke a na-agaghị akwụsị akwụsị. Ndị Palestine na ndị Israel enweela nsogbu ugbu a kemgbe etiti narị afọ nke 20. Ma ọ bụ ezie na esemokwu ahụ nwere ike ịdị mfe nghọta n’oge gara aga — isi okwu ya, echiche nke akụkụ nke ọ bụla, isi ihe mgbochi nye udo — ụfọdụ ndị na-ahụ ihe na-eme kwenyere na ọ bụzi igwe ojii nke mgbagwoju anya, nke nwere ike igosipụta sara mbara Zeitgeist nke angst na ejighị n'aka.
Sari Nusseibeh, onye Palestine a ma ama na-eche echiche na onye isi oche mbụ nke Mahadum Al-Quds, gwara The Media Line na n'oge gara aga esemokwu ahụ yiri ka ọ dị mfe nghọta.
“E nwere ụzọ ndị mmadụ chere na ha nọ ma eleghị anya nke mere ka ha chee na ha ga-ahụ njedebe ya. Mana enweghị ụzọ ugbu a, ọkachasị ụzọ etinyere etinyere, yabụ na ị nweghị ike ikwu n'ezie ebe anyị na-aga, ”ka ọ na-agbaso.
Banyere azịza ndị ga-ekwe omume, Nusseibeh kọwakwuru ọtụtụ ụzọ enwere ike iche, sitere na gọọmentị nke ngalaba ndị kwụụrụ onwe ha na Palestian; guzobe njikọ nke Palestine na Egypt ma ọ bụ Jọdan; gaa na steeti abụọ ma ọ bụ ọbụna ọtụtụ nchịkwa steeti.
N'agbanyeghị ọnọdụ ọ bụla nwere ike ịdapụta, "anyị nwere ike were ihe ndị a dị ka ụkpụrụ nduzi ma ọ bụ ụkpụrụ bụ isi: Anyị nọkọtara ọnụ," ka ọ kwusiri ike. “E nwere ihe karịrị ndị Juu 800,000 ndị Israel nọ n’akụkụ nke ọzọ nke [ókèala 1967 na West Bank], yana ihe karịrị otu nde ndị Palestine nọ n’akụkụ nke ọzọ bụ ụmụ amaala Israel. Agbanyeghị na ị lere ya anya, ndị Izrel na ndị Palestaịn kwesịrị ịdị n'otu.
"N'oge ahụ," ka ọ gara n'ihu, "ha anaghị emekọ ihe n'ụzọ dị mma dịka otu akụkụ - akụkụ Palestian - chere ihu n'ụzọ doro anya na ezighi ezi. Mana ndị mmadụ nọ n'akụkụ abụọ ahụ, ọ bụchaghị gọọmentị, chọrọ inwe udo na nkwụsi ike. Nke a bụ ihe dị mkpa ga-emetụta etu ọdịnihu ga-esi pụta. ”
Mgbe a jụrụ ya banyere ọrụ onye isi ala US Donald Trump, Nusseibeh kwuru na ndị Palestaịn na-ele ya anya "ụjọ n'ihi na ọ dị ka ọ naghị eme ihe ndị mmadụ chere na ndị isi na-eme." N'akụkụ a, ndị nlekọta US ji mkpebi siri ike mee ka okwu abụọ "taboo" pụta n'ihu echiche ndị mmadụ, ya bụ ọnọdụ nke Jerusalem na ndị gbara ọsọ ndụ Palestian.
Ọ kwubiri, "Ugbua ma ibido ha n'ihu ga-enyere ha aka idozi ha ma ọ bụ na ọ gaghị, ọ ga-abụ ihe ịchọpụta,"
Micah Goodman, onye edemede nke Israel kacha mma Chọta 67— Nke a ga-ebipụta n'asụsụ Bekee na Septemba — gwara The Media Line na isi ndị bi n'akụkụ abụọ a nwere ndakpọ olileanya.
“N’ime obodo Palestine, e nwere echiche siri ike na ihe nlere abụọ a kụrụ afọ n’ala. Thekpụrụ nke iji ime ihe ike adaala, kamakwa usoro nke [Onye isi Ala Palestia Mahmoud Abbas] nke enweghị ime ihe ike na nrụgide mba ụwa arụpụtabeghịkwa maka ndị Palestaịn.
"Ndị Israel gbagwojuru anya," ka Goodman kọrọ. "Ọtụtụ n'ime ha kwenyere na ọ bụrụ na anyị nọrọ na West Bank, anyị na-etinye ọdịnihu anyị n'ihe egwu, ma ọ bụrụ na anyị hapụ West Bank, anyị n'otu aka ahụ na-etinye ọdịnihu anyị n'ihe egwu."
Ọ kọwara na ọnwụ a nke eziokwu, na-enye anyị ohere ibido ige ibe anyị ntị. N'akụkụ Israel, ọ bụ ohere maka aka nri na aka ekpe ịgbanwe echiche ma bido ịmaliteghachi mkparịta ụka.
“Ma nke a anaghị eme,” ka Goodman kwupụtara. “Ihe merenụ bụ na a na-enwe mkparịta ụka ọhụrụ na usoro ọhụụ ọhụrụ, ya bụ na Intanet.” Na -echeta echiche nke Marshall McLuhan, onye prọfesọ Canada nke nyochare ọrụ nke mgbasa ozi na ọdịbendị nke oge a, ọ kọwara na anyị nwere nghọta na-enweghị isi banyere etu ozi na mgbasa ozi n'ịntanetị si arụ ọrụ, nsogbu nke na-akawanye njọ na mpaghara esemokwu.
“Ọ bụghịzi ozi na-akpụzi onye na-anọpụ iche, dị ka ọtụtụ ndị chere na mbụ. Kama, ọ bụ 'ihe na-akpụzi ozi ahụ.' Were, dịka ọmụmaatụ, post na Facebook nke na-emetụta ma na-atụle ndapụta na arụmụka. Ọ gaghị agaru ebe ahụ. Mana were otu echiche, kpochapu arụmụka ahụ ma wepụ ya nuance, tinye naanị nkwenye, wee bido ya site na ahụmịhe nke onwe gị wee kwụsị ya na mwakpo onwe gị. Ihe ahụ ga-eme nke ọma.
“N'ihi ya,” ka Goodman kwubiri, “ị ga-atụ anya na ebe ọ bụ na ihe atụ esemokwu ndị a na-ada ada na-ada, na e nwere ohere maka mkparịta ụka ọhụrụ, mana mkparịta ụka ahụ na-adakwa na soshal midia.” N'ihi ya, kama "agha nke echiche" nke ma Israel aka nri na aka ekpe tụlee ma nyochaa echiche nke akụkụ nke ọzọ, ọha mmadụ abanyela na "agha nke ebo."
“Anyị anaghị eji ndọrọ ndọrọ ọchịchị ekwupụta iwu ọzọ,” ka o mesiri ike. Kama nke ahụ, anyị na-eji ndọrọ ndọrọ ọchịchị iji gosipụta ndị anyị bụ — ọ bụ ndọrọ ndọrọ nke njirimara. ”
Ya mere, ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya anyị ilekwasị anya n'echiche dị iche iche n'etiti esemokwu ahụ.
N'oge na-adịbeghị anya, Kọmitii ndị Juu nke America, otu n'ime ụlọ ọrụ ndị Juu kacha ochie na-akwado ndụmọdụ, nwere nzukọ na Jerusalem, nke gụnyere otu nchịkọta aha ya bụ, "Afọ iri abụọ na ise kemgbe Oslo: Gịnị bụ ihe ọzọ maka Usoro Udo?"
Ndị nhazi ya kwuru na Nkwekọrịta Oslo nke 1993 mere ka atụmanya siri ike maka "nzọụkwụ nke udo." Emere nkwekọrịta ahụ na ahịhịa ọcha nke White House. Onye chiburu Palestine Yassir Arafat na onye isi ala Israel n’oge ahụ bụ Yitzhak Rabin nyere aka, ka onye isi ala US n’oge gara aga, Bill Clinton na-ele anya. Otú ọ dị, ihe sochiri “abụwo usoro nkụda mmụọ miri emi nke mkparịta ụka na-akụ afọ n'ala, iyi egwu na-akpasu iwe, okwu na-ewe iwe, ụjọ na ime ihe ike," ka Goodman si kwuo. Kemgbe ahụ, udo adịgidebeghị. ”
Iji ghọta ihe kpatara na usoro Oslo adịghị emezu nkwa ya na iji chọpụta etu enwere ike isi weghachi okwu udo, ogbako ahụ kpọkọtara ndị nnọchi anya mba ụwa nke ọma na mkparịta ụka gara aga.
Tal Becker, onye ndụmọdụ gbasara iwu na Ministri nke Ofesi na Israel, kwuru ogologo oge banyere akparamaagwa dị n'azụ oge a.
"Ọ bụghị maka etu esi ewepụta mgbanwe, kama otu ị ga - esi wee mee ka ikwenye na enwere ike ịgbanwe, ebe ọ bụ na obodo abụọ a kwenyesiri ike na esemokwu a bụ akụkụ na-adịgide adịgide nke ọdịdị ala."
Ọ kọwara na n'usoro nke ihe ngwọta, enwere ọtụtụ nkwupụta na nhazi dị iche iche, ọtụtụ n'ime ha agwụlarị. Mkpa ọ dị ugbu a bụ imetụ okwu ndị miri emi aka.
"Mgbe ị na-eleba echiche nke mmụọ nke obodo ọ bụla anya, mgbe ahụ ị nwere nsogbu dị iche iche." Dịka ọmụmaatụ, Becker tụpụtara, site n'echiche ndị Palestian, “ọ dị ka ọ gaghị ekwe omume itinye nnukwu ike, oge na ego na-agba mmụọ megide Israel wee kwuo na ị chọrọ iso Israel nwee nkwekọrịta. Ọhaneze na-eche na nke ahụ abụghị ihe aga-eme na ezigbo Palestian. N'akụkụ Israel, ọ bụrụ na anyị echegbubiga onwe anyị ókè na echiche anyị bụ na iwu akwadoghị anyị n'akụkụ nke ọzọ, kedụ ka anyị ga-esi nyekwuo ndị anyị na-agọnahụ izi ezi anyị ikike na ohere ka ukwuu? ”
Ihe ịma aka, mgbe ahụ, bụ ịkwanye obodo abụọ ahụ aka ịghọta ihe ọ dị ka ịbụ onye Israel onye Juu ma ọ bụ onye Palestine. “Nke ahụ na-enye ohere maka ọganiihu na ọdịmma nke akụkụ nke ọzọ ka ọ bụrụkwara gị akụkọ ọma, ọ bụghịkwa ibu ọrụ,” Becker kwubiri.
Ndị ọzọ sonyere gụnyere Nickolay Mladenov, onye nhazi mba ụwa jịkọrọ ọnụ nke United Nations maka Usoro Udo nke Middle East; Fernando Gentilini, onye nnọchi anya pụrụ iche nke European Union maka Usoro Udo nke Middle East; na Dennis Ross, onye otu ama ama na Washington Institute for Near East Policy.
Ha metụtara ọtụtụ isiokwu, gụnyere usoro nke mgbanwe dị nso na Palestian Authority ka Abbas na-etolite; Ndakọrịta nke Israel na mba ndị Sunni dị ka ihe na-egbochi ebumnuche Iran na mpaghara; na ịdị njikere nke Onye isi ala Trump iji mepụta atumatu siri ike.
Ross, onye jekwara ozi dị ka onye nlekọta pụrụiche nke Ọwụwa Anyanwụ US n'okpuru Clinton, kwuru na "otu n'ime ihe ịma aka America bụ iweghachi echiche nke ga-ekwe omume."
Nnukwu nkwenye dị n'akụkụ abụọ ahụ, Ross kwuru, dịka akụkụ abụọ ekwenyeghị na nsonaazụ abụọ. “N’ezie, echiche nke obodo abụọ maka mmadụ abụọ bụ naanị otu mgbe nwere ezi uche; otu mba maka mba abụọ bụ ọgwụ ọgwụ maka agha ga-adịgide. ”
Ma Ross na Mladenov rụrụ ụka na a ga-elekwasị anya na ịgbanwere ihe dị na Gaza. “Anyị enweghị ike inwe ọnọdụ ebe ọkụ eletrik na-enye elekere anọ kwa ụbọchị, pasent 96 nke mmiri ọ drinkingụ drinkingụ enweghị ike ịrinkụ mmiri, ma na-ekwe ka nsị na-adịghị mma na-asọba na Mediterenian.
"Mgbe ndị mmadụ na-enweghị ihe funahụrụ ha," ka Ross gbakwụnyere, “ikike nke mgbawa na-adị ukwuu." N'ịgwa echiche ahụ, Mladenov kwusiri ike na "izere agha ọzọ na Gaza pụtara ime ihe ugbu a, taa tupu ya agbawa."
Ndị nnọchi anya gọọmentị abụọ ahụ kwenyere na site na mbido na ọnọdụ jọgburu onwe ya na Gaza, ọnọdụ maka atụmatụ udo nwere ike ịpụta.
Isi Iyi: www.themedialine.org
Ejima obodo World Tourism Association ga-tọrọ ntọala na PATA Travel Mart 2018
Ekpuchitere Nnọọ Afọ 100 nke Arab Amulet na Jerusalem